Parlemantera: « Mihena ny vaton-dRajoelina » | NewsMada
Parlemantera: « Mihena ny vaton-dRajoelina »
Misy tsy mazava. “Nahitana fihenana iray isan-jato isaky ny distrika ny vokatra azon’ny kandidà Rajoelina”, hoy ireo parlemantera avy any Atsimo Atsinanana tetsy Anosy, afakomaly. Nanterin’izy ireo fa tena misy tsy fahatomombanana amin’ireo fitanana an-tsoratra (PV) voarain’izy ireo avy amin’ireo distrika mandrafitra iny faritra Atsimo Atsinanana iny. “Hitaky ny hanokafana fanadihadiana parlemantera ary hametraka fitoriana eny amin’ny HCC izahay raha ilaina izany”, hoy ihany ireto zanak’iny faritra iny ireto. Notsindrin’izy ireo fa hifantoka amin’ny fitadiavana ny mangarahara momba ny fampiasana ny lafiny informatika na ny “logiciel” eo anivon’ny Ceni ny votoatin’izany fitakiana fanadihadiana parlemantera izany.
Fitadiavana ny marina sy ny mangarahara amin’ny voka-pifidianana
Mazava koa anefa ny tenin’izy ireo fa tsy tahotra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa akory izao dingana atao izao. “Fitadiavana sy fikarohana ny marina sy ny mangarahara mba tsy hampikorontana ny firenena, manoloana izao toe-draharaha politika izao”, hoy ihany izy ireo. Mahatsiaro ireto depiote sy loholona ireto fa voahodinkodina ny safidim-bahoaka raha ny fahitana izao voka-pifidianana izao.
Tsiahivina fa anisan’ny nisolo tena ny parlemantera avy any Atsimo Atsinanana ny depiote Ndremanjary Odilon avy any Farafangana, i Koto Herisoa avy ao Midongy Atsimo ary ny depiote avy any Vohipeno, i Tsabotokay Honoré.